🥇 I-VPN ekhuselekileyo nethembekileyo: Ii-VPN ezili-10 eziphambili zika-2022
✅ IVPN yasimahla
🥇 IiVPN ezilungileyo kakhulu
Lonke ixesha zikhona abasebenzisi abaninzi abachaphazelekayo malunga nokhuseleko lwabo (kwaye ngoko banomdla kwi-VPN) ngenxa yokukhula izoyikiso ze-cyber kunye neemeko zobuntlola ezinkulu eziye zaba ngundaba-mlonyeni. Nangakumbi ngamaxesha obhubhane, xa i-SARS-CoV-2 inyanzela abaninzi ukuba banxibelelane ngomnxeba, okuthetha ukuphatha idatha yenkampani ebuthathaka okanye yabucala evela kuthungelwano lwasekhaya olunokuthi lungabi namanyathelo okukhusela ishishini.
IVPN ayinakukunika kuphela umaleko owongezelelweyo wokhuseleko kwiofisi yakho okanye uqhagamshelo lwasekhaya, inokukunceda nangezinye iindlela. Umzekelo, unokutshintsha imvelaphi ye-IP yakho njengoko unqwenela, ukwazi ukukhetha ilizwe lemvelaphi ukuze ukwazi ukwenza ukufikelela kwiinkonzo ezinyiniweyo okanye ezithintelweyo kwilizwe lakho lemvelaphi. Into ekwatsala abasebenzisi abaninzi, ngakumbi iinkonzo zomxholo wokusasaza, kwiVPN.
IiVPN ezili-10 eziphezulu
Phakathi ezona nkonzo zevpn Sicebisa oku Top10:
I-VPN yexabiso eliphantsi. Iimpawu zayo ezibalaseleyo zezi:
IP's evela kumazwe angama-59
Izixhobo ezi-6 ngaxeshanye
Yima ngaphandle kwintengiso yayo
Ndwendwela iwebhusayithi yabo
IP's evela kumazwe angama-90
Izixhobo ezi-7 ngaxeshanye
Imele ukhuseleko lwayo
IP's evela kumazwe angama-61
Imele ixabiso layo
IP's evela kumazwe angama-94
Izixhobo ezi-5 ngaxeshanye
Ibalasele ngomgangatho wayo wenkonzo
IP's evela kumazwe angama-74
Imele umgangatho wayo-ixabiso
IP's evela kumazwe angama-80
Iphawulwe ngesantya sayo
IP's evela kumazwe angama-22
Imele inkonzo yayo yobugcisa
Fihla iesile lam!
IP's evela kumazwe angama-190
Izixhobo ezi-10 ngaxeshanye
Ilunge kakhulu kwiP2P kunye neTorrent
IP's evela kumazwe angama-46
Ilungele ukusetyenziswa kunye neNetflix
IP's evela kumazwe angama-56
Inketho elungileyo kwiintsapho
Yonke into okufuneka uyazi malunga neVPN
Ngaphambi kokuqesha iVPN kufuneka uyazi uluhlu lweenkcukacha ukuze ukwazi ukukhetha eyona ifanele iimfuno zakho kwaye kwakhona ukugqiba ukuba ufuna ngokwenene inkonzo ye-VPN okanye hayi.
Omnye I-VPN (iNgcaciso yeNgcaciso yangasese), okanye inethwekhi yabucala enenyani, ngokwesiseko yinkonzo ekuvumela ukuba uqhagamshele kuthungelwano olufana ne-Intanethi ngendlela ekhuselekileyo. Ukwenza oku, i-obfuscation yemvelaphi ye-traffic yenethiwekhi isetyenzisiweyo, inika i-IP eyahlukileyo kwi-original enikezelwa ngumboneleli wakho wenkonzo ye-Intanethi (ISP).
Kwakhona, iVPN iya kuvelisa "itonela” unxibelelwano kunye netrafikhi efihliweyo, oko kukuthi, yonke i-traffic yedatha engenayo nephumayo iya kukhuselwa nge-algorithm yoguqulelo oluntsonkothileyo ukwenzela ukuba amaqela esithathu angakwazi ukuwathintela kwisicatshulwa esicacileyo ngokuhlaselwa ngokusebenzisa iziqhumiso (i-network packet sniffers) ezifana nokuhlaselwa kohlobo lwe-MitM (Indoda phakathi), kunye iya kuhlala ifihliwe kwiinkonzo ezithile kunye nababoneleli abanokuthi babambe itrafikhi yakho kwaye bayigcine.
Konke oku ngasentla kunezinye "iziphumo ebezingalindelekanga" ezongezelelweyo. Ngokomzekelo, ngokutshintsha i-IP, iya kukuvumela kwakhona fikelela kwisiqulatho esithintelweyo okanye esilinganiselweyo kwindawo yakho yejografi. Umzekelo, ngokuqinisekileyo uzame ukubukela ijelo losasazo elisuka kwelinye ilizwe kwaye likubonisa umyalezo okwazisa ukuba le nkonzo ifumaneka kuphela kubasebenzisi abasuka kwelo lizwe. Ewe, olu hlobo lwesithintelo lunokuthintelwa ngeVPN…
free vs ihlawulwe
Kukho ezinye Iinkonzo zeVPN zasimahla, kunye nezinye ezihlawulweyo ezinikezela ngeenkonzo eziqingqiweyo zasimahla. Xa ucinga ukusebenzisa i-VPN, kungenxa yokuba ufuna ukhuseleko oluphezulu okanye ukufikelela kwiinkonzo ezithile ezithintelweyo kwindawo yakho. Kwaye ayisiyiyo into ekufuneka uyiphathise kwiinkonzo zasimahla.
Esinye sezizathu kukuba iinkonzo zasimahla zikholisa ukuba nenqanaba elisezantsi lokhuseleko kodwa, ngaphezu kwako konke, ngenxa yokuba banayo ukulinganiselwa kwezithuthi yonke imihla, ngeveki okanye ngenyanga. Oku kuya kukuthintela ekubeni ukwazi ukusebenzisa kakhulu ezi simahla kwaye ayinakwenzeka kwiinkonzo zevidiyo zokusasaza ezisebenzisa idatha eninzi (ingakumbi ukuba ziyi-HD okanye i-4K). Kwaye okubi ngakumbi, iinkonzo zeVPN zasimahla azikuvumeli ukuba usebenze ngeenkonzo zokusasaza kwiimeko ezininzi.
Ke ngoko, xa ufikelela kwenye yeenkonzo zasimahla zeVPN uya kugqiba ukhathazeke kwaye uphelele kwinkonzo ehlawulwayo ngokungafumani oko ubukufuna ngokwenene. Ukongeza, iinkonzo ezihlawulwayo akufuneki ukuba zibize kakhulu, kude noko, kukho izibonelelo zejusi ezinokuthi ngee-euro ezimbalwa ngenyanga ziya kukuvumela ukuba ube neenkonzo zeprimiyamu.
IiVPN zethu esizithandayo
Ukusuka3, € 10
Ukusuka2, € 75
Ukusuka1, € 79
Kwaye khumbula oko bathethayo, xa into ikhululekile, imveliso nguwe. Oko kukuthi, ezinye iinkonzo zasimahla ziya kubeka esweni umsebenzi wakho kwaye unokuwusebenzisa ukuwuthengisa kubantu besithathu, ubonise iintengiso ngokokhetho lwakho, okanye ufumane uhlobo oluthile lwembuyekezo yezoqoqosho kuyo. Ke ngoko, banikezela ngenkonzo yasimahla, kodwa benza inzuzo kwelinye icala…
Ezinye iinkonzo zisenokude thengisa i-bandwidth kwabanye abathengi benkonzo yakho yentlawulo. Oko kukuthi, basebenzisa inxalenye yezibonelelo zakho ukuze bazidlulisele kubasebenzisi abaneakhawunti yeprimiyamu.
Okwesithathu-VPN okanye eyakho?
Kuyinyaniso ukuba unako yenza eyakho iVPN se benzisa iseva ene-GNU/Linux kunye ne-OpenVPN (okanye ezinye iinkqubo zokusebenza kunye nesoftware efanayo). Kodwa olu hlobo lwe-VPN luya kuba luncinci ngakumbi malunga nesantya nge-bandwidth yenethiwekhi yakho kwaye kuya kufuneka wenze ukuqina kunye nokulawula ngokwakho, kwaye oko kubandakanya ukujongana neengxaki zobuchwepheshe ezinokuvela kumncedisi.
Oku ayisiyiyo inketho kuninzi lwabasebenzisi, hayi nakubasebenzisi abaninzi abaziingcali. Ngoko ke, eyona nto ikhululekile ikhontrakthi yenkonzo ye-VPN yomntu wesithathu kwaye wonwabele ubumnandi obunikezelayo. Kule meko, kuya kufuneka ukhathazeke ngokufaka umxhasi kwaye uqale ukonwabela inkonzo ukusuka kusuku lokuqala.
Ngaba lukhetho olulungileyo lokuthenga i-router yeVPN?
Kuyinyani ukuba kukho ezinye iirutha, okanye iirotha, ukuba banikezela ngeVPN esele ibandakanyiwe. Zii-premium routers ezidla ngokuxabisa ngaphezulu komndilili, kodwa zibonelela ngothotho lweenzuzo ezinomdla kunye neenkonzo ezongezelelweyo. Umzekelo, ungafumana imizekelo efana nale:
I-TP-LINK ye-Gigabit Multi-WAN...
Unxibelelaniso WRT 3200 ACM
I-Linksys WRT32X yeMidlalo
INetgear Nighthawk X4S
Nangona lukhetho olukhulu kwezinye iimeko, Kufuneka ulumke ngezinye iimodeli zerouter zeVPN ezitshiphu. Abanye babo babonisa ukuba banolu hlobo lwenkonzo kodwa lubhekisela kuphela kumxhasi, kwaye abanalo inkonzo enikezelwa ngumncedisi. Ke ngoko, kuya kufuneka ukuba uqeshe inkonzo yomntu wesithathu ukuyenza isebenze.
Ukuze ungabi nangxaki, senze ukuhlanganiswa kwezona ndlela zibalaseleyo zeVPN onokuthi ufike kuzo ngokucinezela iqhosha elilandelayo:
Jonga iiRutha zeVPN
Lumkela lento! Abaninzi bathenga enye yezi routers kwaye babe noxolo lwengqondo, kodwa idatha yabo nangoku nje engakhuselekanga.
Izinto eziluncedo zokusebenzisa iVPN
Njengayo nayiphi na enye imveliso kunye nenkonzo, i-VPN ineenzuzo kunye neengxaki zayo. Kodwa ngokuqinisekileyo izibonelelo zinamandla ngakumbi ukukukholisa ukuba umqeshe:
Uguqulelo oluntsonkothileyo lwetrafikhi yenethiwekhi ukuze idatha yakho ingagqithiselwa ngokubhaliweyo okucacileyo kunye nokuhlonipha ubumfihlo (ulwazi olugqithiselwe phakathi komthumeli kunye nomamkeli alunakufikelelwa ngabantu besithathu ngaphandle kwemvume). Kwaye oko kubandakanya yonke i-traffic iyonke, kwaye ayifani neeseva zommeli onokuthi uziqwalasele kwisiphequluli sewebhu okanye kwii-apps ezithile. Kule meko, zonke iitrafikhi ezivela kwizixhobo zakho ziya kukhuselwa.
Imfihlo enkulu kunye nokungaziwa. Hayi kuphela uguqulelo oluntsonkothileyo, kodwa nokufihla imvelaphi ye IP.
Izithintelo zokudlula kwindawo yakho yejografi usebenzisa i-IP evela kwamanye amazwe apho loo nkonzo isebenza ngaphandle kwemida.
Umnikezeli wakho we-Intanethi okanye i-ISP (iTelefónica, iOrenji, iEurona, iJazztel, iVodafone,…) awuyi kuba nakho ukwazi ukusetyenziswa okwenzayo koqhagamshelwano lwakho. Ngaphandle kweVPN iya kukwazi ukwazi amaphepha owandwendwelayo, ukuba ukhuphela umxholo wepirated, njl. Oku kunjalo kuba zonke iitrafikhi ziya kudlula kwiiseva zabo kwaye irekhodi layo liya kuhlala. Ukongeza, umthetho ufuna ukuba i-ISP igcine idatha enjalo iminyaka emininzi. Yonke le datha ingathengiswa okanye idluliselwe kwiinkampani zentengiso, ii-arhente zikarhulumente, njl.
ingqibelelo yedatha, ukuze xa befika kwindawo abasingise kuyo babe kwangabo basuka apho babesuka khona. Oko kukuthi, azitshintshwa endleleni.
I-VPN ilula kakhulu, kwaye ngamanye amaxesha ibandakanya ukucofa iqhosha ukuqala okanye ukuyimisa. Endaweni yoko, ezinye iinkonzo ezizezinye ezifana neeseva zommeli, kunye nezinye iindlela zokhuseleko ezahlukeneyo, zinokuthetha ukuntsonkotha ngakumbi.
Ukulondoloza. Nangona inexabiso, liphantsi kakhulu kunezinye iinkonzo okanye iintlawulo kwiingcali zokhuseleko ezinokukhusela inethiwekhi.
Ngokuqinisekileyo iVPN ayinayo Amanqaku amabi iphawuleka kakhulu. Zimbini kuphela iingongoma ezinokuthi zigxininiswe ezichasene nayo:
Price: Nangona kukho ezikhululekileyo, sele ndiphawule ukuba ayizona zifanelekileyo. Ke ngoko, ukuze ube neVPN elungileyo kufuneka uhlawule. Nangona kunjalo, azikho ixabiso eliphezulu kwaye zivumelekile kubantu abaninzi. Nge-router eneVPN unokunqanda ezi ntlawulo…
Isantya sonxibelelwano: Ngokucacileyo, xa ufihla idatha, kufuneka ibethelwe kwaye ikhutshwe ukuze ukwazi ukuyibona ngokungathi awunayo i-VPN. Oko kukuthi, nokuba kubonakala kuwe, kodwa oko kuthetha umthwalo owongezelelweyo oya kunciphisa isantya. Ukuba une-ADSL ekhawulezayo, i-fiber optic, okanye i-4G / 5G umgca, ayiyi kuba yingxaki kakhulu. Inokuba yingozi kakhulu kuqhagamshelo olucothayo kuphela (okanye xa unohlobo oluthile lomda wedatha kwaye ikwenza kancinane kude kuphele inyanga).
Kutheni ndifuna iVPN?
Kuya kufuneka uvavanye ukuba ukuba ne-VPN yenza nayiphi na ingqiqo kwimeko yakho. Ngokomgaqo, ngenxa yabucala kunye nezizathu zokhuseleko kuphela, kufanelekile. Ngapha koko, ubumfihlo lilungelo kwinethiwekhi enyhashwa mihla le ngamaqumrhu amakhulu. NgeVPN ungabeka isisombululo kule nto. Kodwa kungakhathaliseki oku, zikho nezinye izizathu zokuba kutheni ufuna iVPN:
I-SARS-CoV-2: Lo bhubhani ulutshintshile uluntu kwaye utshintshe indlela yokwenza ngeendlela ezininzi, nasemsebenzini. Ngoku kukho iinkampani ezininzi kunye nee-freelancers ezisebenza ngocingo. Oku kubandakanya ukusebenzisa izixhobo zakho ukuqhagamshela (jonga i-BYOD) kunye nenethiwekhi yakho yasekhaya. Iinkampani ezininzi ziphatha idatha yabathengi abanobucayi (idatha yerhafu, iifoto zangasese, ulwazi olukhuselwe yipropathi yengqondo, idatha yezonyango, ...) kwaye ngaphandle kwe-VPN baya kuba semngciphekweni wokuvuza okanye ukwamkelwa ngamaqela angaphandle angagunyaziswanga.
Khusela idatha yakho yokukhangela: Nge-VPN unoluhlu olongezelelweyo lokukhusela njengoko ndikhankanyile kwindawo yangaphambili. Oku kubaluleke ngakumbi xa usebenzisa unxibelelwano lukawonke-wonke okanye olungakhuselekanga lwe-WiFi ukufikelela kwiinkonzo ezithile zebhanki, njl. njl., ngaphandle kokuba abanye bakwazi ukuthintela amagama ayimfihlo kunye nolunye uhlobo lweenkcukacha okanye idatha efakiweyo.
I-Bypass censorship ye-intanethi: Ukuba udibana nenkonzo okanye usetyenziso olungafumanekiyo kwindawo yakho yejografi, ngeVPN ungafikelela kuyo ngokufumana iIP evela kwelinye ilizwe. Oku kunokuba luncedo kakhulu ukubukela ezinye iitshaneli ezikwi-intanethi, ukufikelela kumxholo ongafumanekiyo kumaqonga athile okusasaza (AppleTV, Netflix, Disney +, F1 TV Pro,...), kunye nakwiinkqubo ezithile ezithintelweyo kuGoogle Play, kwiVenkile yeApp, njl njl.
I-P2P kunye neTorrent Khuphela: ukukhuphela umxholo nge-Torrent okanye i-P2P amanethiwekhi, phakathi kwezinye iiwebhusayithi ukukhuphela umxholo we-pirated okanye ongekho mthethweni, unokuthembela kwi-VPN ukwenza oko ngendlela engaziwa kwaye i-ISP ayikwazi ukuqaphela lo msebenzi. Nangona oku kungekho semthethweni kwaye uya kuyenza ngomngcipheko wakho…
Njengoko ubona, usetyenziso lweVPN luya ngaphaya kokhuseleko olulula...
Yintoni endimele ndiyazi ukuze ndikhethe eyona VPN ingcono?
Kukho ezithile iinkcukacha zobugcisa kufuneka uhlale esweni ngakumbi xa uthelekisa ezinye iinkonzo zeVPN phakathi apho unokungabaza. Zinokuba luphawu olulungileyo lokumisela umgangatho wenkonzo kwaye ukuba ifaneleka ngcono iimfuno zakho.
Inani labancedisi kunye ne-IP
NordVPN AES-256 Khawuleza Ukusuka kumazwe e-59 6 ngaxeshanye Ukunyuswa
CyberGhost AES-256 Khawuleza Ukusuka kumazwe e-90 7 ngaxeshanye Khu seleko
Surfshark AES-256 Khawuleza Ukusuka kumazwe e-61 Unlimited Ixabiso
ExpressVPN AES-256 Ku lungile Ukusuka kumazwe e-94 5 ngaxeshanye Umgangatho wenkonzo
Zenmate AES-256 Ku lungile Ukusuka kumazwe e-74 Unlimited
Shield Hotspot AES-256 Khawuleza Ukusuka kumazwe e-80 Izixhobo ze-5 Isantya
TunnelBear AES-256 Ku lungile Ukusuka kumazwe e-22 Izixhobo ze-5 Inkonzo yezobugcisa
Fihla iesile lam! AES-256 Khawuleza Ukusuka kumazwe e-190 10 ngaxeshanye Ilunge kakhulu kwiP2P kunye neTorrent yokukhuphela
ProtonVPN AES-256 Ku lungile Ukusuka kumazwe e-46 10 ngaxeshanye Ilungele ukusetyenziswa kunye neNetflix
PrivateVPN AES-256 Ku lungile Ukusuka kumazwe e-56 6 ngaxeshanye Inketho elungileyo kwiintsapho
Ezinye iinkonzo ze-VPN zinenani elikhulu lamaseva asasazwa kumazwe amaninzi, okuya kuba yinzuzo ecacileyo. Ukongeza, abanye bakubonelela nge IP eyahlukileyo random, kodwa ezinye iinkonzo ukuya phambili kwaye kukuvumela ukhethe imvelaphi uthe IP.
Oku kunomdla kakhulu kwi iinkonzo ezithintelweyo okanye umxholo. Umzekelo, khawucinge ukuba ufuna ukufikelela kwinkonzo efumaneka kuphela eSweden. Ngenye yezi VPN unokufumana i-IP yaseSweden kwaye ufikeleleke ngokungathi ungomnye waseSweden ...
I-algorithm yokubhala ngokufihlakeleyo
Yenye yezona datha zibalulekileyo ukhuseleko ukusuka kwinkonzo. Inokuchaphazela nokusebenza. Ngokucacileyo, okukhona ukhuselekile ngakumbi isantya uya kulahlekelwa, nangona ezinye iinkonzo ze-VPN ezisemgangathweni ziye zalawula ngobuchwephesha obuthile ukuze oku akunjalo kwaye banokubonelela ngesantya esihle kunye nokhuseleko.
Nanini na xa ukhetha i-VPN, kufuneka ukhethe enye ene-algorithm eyomeleleyo ye-encryption engenaziphene ezaziwayo. Enye yazo i-algorithms yi-AES-256olu lukhetho olukhulu. Enyanisweni, iinkonzo ezininzi zokuhlawula zikhetha ukukhuselwa kwinqanaba lomkhosi, eliphakathi kwezona ziphezulu zikhoyo.
Ukongeza kwi-encryption, ezinye iinkonzo zentlawulo zinetekhnoloji yokukhusela ezongezelelweyo okanye amanyathelo kubathengi bazo. Kodwa nokuba kunokwenzeka, ziphephe ii-algorithms ezingakhuselekanga njenge-SHA-1, MD4, kunye ne-MD5 eziye zaphulwa.
Kwaye khumbula, akukho 100% inkqubo ekhuselekileyo. Eyona nto iyingozi kakhulu kukukholelwa ukuba awunakuchaphazeleka. Enyanisweni, abanye baxhasi Baye bakwazi ukuphula olu nxibelelwano ngokuthatha inzuzo yolunye uhlobo lobuthathaka okanye ezinye iindlela zobuqhetseba ezifana nokubiwa okungundoqo.
Yenye yezona datha zibalulekileyo ukuba awufuni ukuba iVPN icinezele yakho isantya senethiwekhi ngendlela enkulu. Ngoko ke, kufuneka uhlale ukhetha iinkonzo ngesantya esihle. Uninzi lweenkonzo zangoku zibonelela ngeenkonzo ngesantya esiphezulu, ngoko ke akuyi kuba yingxaki kakhulu, ngakumbi ukuba usebenzisa unxibelelwano olukhawulezayo (ADSL, i-fiber optics,...).
Ubumfihlo kunye nokungaziwa
Andibhekiseli kwinethiwekhi ngokwayo, kodwa kwidatha umboneleli wenkonzo yeVPN ngokwayo angayigcina. Njengoko benditshilo ngaphambili, idatha ayizukudlula kwiiseva ze-ISP, kodwa iya kudlula kwezo ze Umnikezeli weVPN.
Abanye bababoneleli gcina idatha yelog njengegama lakho, iinkcukacha zentlawulo, i-IP yakho yokwenyani, njl. Idatha enokukunceda ukuchonga. Oko kuyacetyiswa, ngoko ke kufuneka ufunde ushicilelo oluhle lokuba ngaba aba baboneleli bayayigcina okanye hayi le datha. Balumkele abo bazigcinayo kwaye usoloko ukhetha abo bagcina ezona rekhodi zincinci.
Ezinye iinkonzo zeVPN zasimahla azikho zobugcisa okanye inkonzo yabathengi okanye uhlwempuzekile. Kwimeko yeenkonzo zokuhlawula, oku kudla ngokuba ngcono kwaye 24/7 (iiyure ezingama-24 kunye neentsuku ezi-7 ngeveki), kodwa akufani kuzo zonke iimeko.
Ezinye iinkonzo zinika ingqalelo kuphela ngesiNgesi, abanye baya kuba nayo nangeSpanish. Zihlala zombini ngokufowuna nange-imeyile, kwaye abanye bade babe nencoko ephilayo ukuphendula imibuzo yakho okanye ukusombulula iingxaki ezinokuvela.
Inkxaso okanye amaqonga
Iinkonzo zeVPN zasimahla zinenkxaso encinci, kodwa uninzi lwabahlawulweyo banenkxaso enkulu malunga namaqonga axhaswayo. Ezi nkonzo zineenkqubo zabathengi ezinokufakwa kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza ezifana Windows, macOS, Linux, Android, iOS, njl. Abanye bade bayivumele ukuba yenziwe kwiiTV ezithile ezihlakaniphile kunye nakwiziphequluli ngokusebenzisa izongezo.
Jonga kakuhle uhlobo lweenkqubo zokusebenza ozisebenzisayo ekhaya okanye emsebenzini kwaye soloko ukhetha umboneleli weVPN onokukunika umxhasi osemthethweni uyaxhaswa.
Abo bathengi ndithetha ngabo kwicandelo langaphambili banojongano lomzobo olunokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi nobuhlobo. Ngokuqhelekileyo zilula kwaye awudingi naziphi na izakhono zekhompyuter ukuvula nokucima i-VPN okanye ukwenza useto oluthile kuyo.
Ngokuqhelekileyo kulula njengokuqhuba umxhasi weVPN kunye Cofa iqhosha ukuze inkonzo isebenze kwaye iqale ukwenza "umlingo" wayo.
Kwiinkonzo zeVPN ezihlawulwayo ungazifumana iindlela ezininzi zokuhlawula umrhumo. Ezi ndlela zokuhlawula zinokuba zininzi:
Ikhadi letyala: Ikhululekile kwaye iqhelekile kubasebenzisi abaninzi.
PayPal: Amanye amaqonga nawo ayamkela intlawulo ngeli qonga likhuselekileyo apho ufuna i-imeyile yakho kuphela.
Iivenkile zeApp: Ezinye ii-VPN zamaqonga eefowuni zivumela intlawulo ngeenkonzo zokuhlawula kwiivenkile ze-app zamaqonga eefowuni, njengeGoogle Play, i-App Store, njl.
Iimali zemali zedijithali: ii-cryptocurrencies zivumela iintlawulo ezingaziwa ngokupheleleyo, ezifana nezo zenziwe ngeBitcoin. Ababoneleli abaninzi be-VPN baxhasa olu hlobo lwentlawulo ye-cryptocurrency.
abanye: Ezinye zikwaxhasa ezinye iindlela ezahlukeneyo.
Mhlawumbi igama alikhali intsimbi DMCA, kodwa ligama elisingisele kumthetho wokhuselo lwamalungelo okukhuphela eUnited States. Lo mthetho ukhusela zonke iindidi zesiqulatho esinje ngeemuvi, umculo, isoftwe, iincwadi, njalo njalo ngokuchasene nobutsotsi.
Kwaye le nto inento yokwenza neVPN? Ngokulula, abanye ababoneleli be-VPN banekomkhulu labo kumazwe anemithetho engacingi ngokuphendula izicelo ezivela eUnited States xa kwenziwe umsebenzi othile wobuqhophololo. Oko kukuthi, bangaphakathi iindawo ezisemthethweni ezikhusela abathengi babo ukuba idatha ibiceliwe ukuba igwetywe.
Kodwa ayizizo zonke iinkonzo ze-VPN ezisebenza kolu hlobo lweparadesi ngaphandle kwale mithetho, ezinye zikwintsimi apho zenza khona Ezo zicelo ziya kwamkelwa.. Ngoko ukuba usebenzisa i-VPN yakho kwimisebenzi yolwaphulo-mthetho, kufuneka ubeke ingqalelo kule nto. Nangona kunjalo, kule bhlog asikhuthazi ukusetyenziswa ngobuqhetseba…
1 IiVPN ezili-10 eziphezulu
2.0.0.1 Yima ngaphandle kwintengiso yayo
3.0.0.1 Imele ukhuseleko lwayo
4.0.0.1 Imele ixabiso layo
5.0.0.1 Ibalasele ngomgangatho wayo wenkonzo
6.0.0.1 Imele umgangatho wayo-ixabiso
7 Shield Hotspot
7.0.0.1 Iphawulwe ngesantya sayo
8.0.0.1 Imele inkonzo yayo yobugcisa
9 Fihla iesile lam!
9.0.0.1 Ilunge kakhulu kwiP2P kunye neTorrent
10.0.0.1 Ilungele ukusetyenziswa kunye neNetflix
11.0.0.1 Inketho elungileyo kwiintsapho
12 Yonke into okufuneka uyazi malunga neVPN
12.1 Yintoni i-VPN?
12.2 free vs ihlawulwe
13 IiVPN zethu esizithandayo
13.1 Okwesithathu-VPN okanye eyakho?
13.2 Ngaba lukhetho olulungileyo lokuthenga i-router yeVPN?
13.3 Izinto eziluncedo zokusebenzisa iVPN
13.4 Ukungalungi kweVPN
13.5 Kutheni ndifuna iVPN?
14.0.0.1 Yima ngaphandle kwintengiso yayo
15 Yintoni endimele ndiyazi ukuze ndikhethe eyona VPN ingcono?
15.0.5 Molo VPN
15.0.6 Shield Hotspot
15.0.10 I-Radmin VPN
15.0.12 Chukumisa iVPN
15.1 Inani labancedisi kunye ne-IP
15.2 I-algorithm yokubhala ngokufihlakeleyo
15.4 Ubumfihlo kunye nokungaziwa
15.5 uxhaso lobuchwepheshe
15.6 Inkxaso okanye amaqonga
15.7 GUI yobuhlobo
15.8 Iindlela zokuhlawula
15.9 Izicelo zeDMCA
IiVPN ezilungileyo kakhulu
I-VPN ekhuselekileyo 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies